निर्धक्क भएर मतदान गर्नु तर पहिला मतदान केन्द्रमा कसले के गर्नु हुँदैन जान्नु ?
May 12, 2022 N88LeaveaComment on निर्धक्क भएर मतदान गर्नु तर पहिला मतदान केन्द्रमा कसले के गर्नु हुँदैन जान्नु ?
काठमाडाैं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा निर्धक्क भएर मतदान गर्न आम मतदातालाई आह्वान गर्नुभएको छ । निर्वाचन हुने अघिल्लो दिन आज सन्देश दिँदै प्रमुख आयुक्त थपलियाले कसैको प्रलोभन र प्रभावमा नपरी आपूmलाई मन परेको उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्नमा स्वस्तिक छाप लगाई आफूले प्रदान गरेको अमूल्य मत बदर […]
नेकपा एमालेमा सबैभन्दा धेरै निर्विरोध, कहाँ-कहाँ छन् ?
May 12, 2022 N88LeaveaComment on नेकपा एमालेमा सबैभन्दा धेरै निर्विरोध, कहाँ-कहाँ छन् ?
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी नेकपा एमालेका उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । नेकपा एमालेबाट एक गाउँपालिका अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष, १८ वडाध्यक्ष र ११८ वडासदस्य गरी १३९ जना निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको छ । नेपाली काँग्रेसबाट निर्विरोध हुनेको संख्या ११५ रहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको भोलि मतदान हुँदै छ । मतदान अघिनै डोल्पा शे […]
राशि अनुसार शुक्रबार गर्नुहोस यी काम, जीवनभर रहनेछ माता लक्ष्मीको कृपा
May 12, 2022 May 12, 2022 N88LeaveaComment on राशि अनुसार शुक्रबार गर्नुहोस यी काम, जीवनभर रहनेछ माता लक्ष्मीको कृपा
शुक्रबार धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा गर्ने गरिन्छ । माता लक्ष्मीको कृपाले मानिसलाई जीवनमा धन ऐश्वर्य प्राप्त हुन्छ । जुन घरमा लक्ष्मीको वास हुँदैन, त्यो घरमा गरिबीको वास हुन्छ । तुला- तुला राशिका व्यक्तिहरूले महालक्ष्मीको कृपा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने ‘ओम् हरीम् क्लीम् श्रीम’ मन्त्रको जप गर्नु निकै फलदायी हुन्छ। वृश्चिक- यस राशिका व्यक्तिहरूले “ओम ॐ क्लेन […]
May 12, 2022 N88LeaveaComment on जे बर मागे पनि पूरा हुने सुपादेउराली माइकाे दर्शन गरी हेर्नुस आजकाे राशिफल
केही राशिका लागि शुक्रबार महत्वपूर्ण रहनेछ। शुक्रबार सिंह राशि भएका व्यक्तिहरूले आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अर्कोतर्फ, तुला राशिका व्यक्तिहरूले अनावश्यक रूपमा अधीनस्थहरूमाथि रिसाउनु पर्दैन। बैशाख ३० गतेकाे राशिफल मेष: मेष राशिका व्यक्तिहरूले लामो समयदेखि नयाँ परियोजनाको बारेमा सोचिरहेका थिए। अब त्यो बेला आएको छ, तयार हुनुपर्छ । कम्पनीको कामका कारण भ्रमणमा पनि […]
उपराष्ट्रपति पुनले मतदान नगर्ने
May 12, 2022 N88LeaveaComment on उपराष्ट्रपति पुनले मतदान नगर्ने
काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान नगर्ने भएका छन् । उनले उपराष्ट्रपति भएसँगै कुनै पनि मतदानमा सहभागी भएका छैनन् । उपराष्ट्रपतिको सचिवालयले पद राष्ट्रको साझा व्यक्तित्वका रुपमा रहेको र अभिभावकीय भूमिकामा रहनुपर्ने भएकाले पुनले मतदान नगर्ने जनाएको छ । शीर्ष नेताको मतदान कहाँबाट ? स्थानीय तह निर्वाचन सम्मुखमा आइपुगेको छ । भोलि वैशाख ३० […]
भरतपुरमा सत्ता गठवन्धनले थाल्याे चलखेल, चुनाव नहुँदै यस्ताे लफडा !
May 12, 2022 N88LeaveaComment on भरतपुरमा सत्ता गठवन्धनले थाल्याे चलखेल, चुनाव नहुँदै यस्ताे लफडा !
काठमाडौं । शुक्रबार हुने स्थानीय चुनावको अघिल्लो दिन भरतपुर महानगरपालिकामा सत्ता गठवन्धनको व्यापक चलखेल भएपछि नेकपा एमालेले उम्मेदवारी खारेजीको माग गरेको छ । आज सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित ३ जना मन्त्रीहरु भरतपुरमा मतदाता प्रभावित बनाउने गरी घुमफिर गरिरहेपछि एमालेले गठबन्धनका उम्मेदवारी खारेजीको माग गरेको छ । जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेले […]
काठमाडौं महानगरको प्रमुखका उम्मेदवारले कहाँबाट गर्दैछन् मतदान ?
May 12, 2022 N88LeaveaComment on काठमाडौं महानगरको प्रमुखका उम्मेदवारले कहाँबाट गर्दैछन् मतदान ?
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदको उम्मेदवारी दिएका सिर्जना सिंहले वडा नम्बर १६ र केशव स्थापितले वडा नम्बर २८ बाट मतदान गर्ने भएका छन् । सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट कामपाको प्रमुखको लागि उम्मेदवारी दिएकी सिंहले कामपाको वडा नम्बर १६ स्थित युवक माविबाट मतदान गर्ने बताइएकोे छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को तर्फबाट प्रमुख पदको उम्मेदवारी […]
May 12, 2022 N88LeaveaComment on भरतपुरको मतगणना अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रमा
चितवन । शुक्रबार हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रमा गरिने भएको छ । मतगणनाको तयारीको काम भईरहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम पौडेलका अनुसार केन्द्रको ‘सी’ ब्लकमा मतगणना गर्ने तयारी गरिएको हो । सो ब्लकमा सिसिटिभि जडानको काम सकिएको छ भने तार जाली लगाउने […]
May 12, 2022 N88LeaveaComment on आजदेखि लगातार छ दिन विद्यालय बन्द
काठमाडाैं । सरकारले हरेक शुक्रबार ४ बजेसम्मनै पठनपाठन सञ्चालन गर्ने र बर्खे तथा हिउँदे बिदा घटाएर हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले आगामी जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले यसलाई कार्यान्वयन गराउन शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ […]
कुन नेताले कहाँबाट हाल्दै छन् भोट ? हेर्नुस् विस्तृतमा
May 12, 2022 May 12, 2022 N88LeaveaComment on कुन नेताले कहाँबाट हाल्दै छन् भोट ? हेर्नुस् विस्तृतमा
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान नगर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि सबै राजनीतिक दलका नेताहरू मतदान गर्न गृहजिल्ला गइरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारी र उपराष्ट्रपति पुनले भने मतदान नगर्ने भएका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार संविधानको संरक्षक र देशवासीको अभिभावक भएको भन्दै कुनै दल विशेषका उम्मेदवारलाई […]